#Jose Mourinho ayaa uu Sheegay Frank Lampard Hoos u eego Da'yarta Chelsea - Get Latest News From Horn of Africa
#Jose Mourinho ayaa uu Sheegay Frank Lampard Hoos u eego Da’yarta Chelsea
Tababarihii hore kooxda Chelsea ee Jose Mourinho ayaa aaminsan in Blues ay ku jirto xaalad fiican inta ay ka hoos shaqeenayaan tababaraha cusub Frank Lampard.
Lampard ayaa dhawaan la wareegay shaqada tababarka ee kooxda Chelsea, kaddib markii uu badal u noqday Maurizio Sarri, wuxuuna dib u soo ceshaday ciyaartoy fara badan, oo amaah lagu siiyay kooxo kale, maadaama kooxda laga mamnuucay suuqa kala iibsiga ee ciyaartoyda mudo laba xili ciyaareed ah.
Hadaba Jose Mourinho ayaa wareysi uu maanta oo Khamiis ah ku bixiyay shabakada “Sky Sports” wuxuu ku sheegay:
“Waxaan u maleynayaa in macalin walba oo adduunka ah uu jecel yahay inuu ku soo darsado ciyaartoy da’ayar oo akadeemiyada ah, waxaan u maleynayaa in Chelsea ay tahay koox qaas ah xaalada ay hada ku jirto, waxaan ku siin doonaa tusaale, Chelsea waxay u baahan tahay daafac dambe, uma baahnid inaad soo iibsato ciyaaryahan kale, uma baahnid inaad bixiso lacago kale… waxaa jooga Kurt Zouma”.
“Waa geesiga England, wuxuu u soo ciyaaray Chelsea, wuxuu u ciyaaray Stoke City, wuxuu u ciyaaray Everton, wuxuu u ciyaaray France, waa laacibkaaga, wuxuu ku maqnaa amaah, xaggee ayaad ka iibsan laheyd ciyaartoy isaga ka wanaagsan?”.
“Waxaad dooneysaa weeraryahan da’ayar ah, Tammy Abraham waa milkiyadaada, wuu garanayaa kooxda, wuxuu wax ku bartay kooxda, wuxuu ku maqnaa xili amaah ah, wuxuu ciyaaray kulamo qaar ee horyaalka Premier League ah, wuxuu ka ciyaaray koox heer sarre ah, Aston Villa, waa diyaar”.
“Miyey Chelsea u baahan tahay inay iibsato weeraryahan sarre? Waa maya, sababtoo ah waxaa marar badan ayaa lagu dhaleeceeyay Blues tirada ciyaartoyda amaahda ah, waana in kabadan 30 ama 40 ciyaartoy, balse haatan waqtigii ayaa yimid, waxayna heystaan jawaabo aysan kuwa kale heysan”.
“Sidaas darteed uma maleynaayo inay jirto dhibaata heysata iyaga. dhibaatada kaliya ee muuqata waa luminta ciyaaryahan cajiib ah, Eden Hazard wuxuu ahaa ciyaaryahan gaar u ah Chelsea weyna iska lumiyeen, marka taasi laga reebo uma maleynayo inay jirto dhibaato kale ee hortaagan kooxda Blues”.